I nomuthi "Alprazolam" iyi-ejenti anxiolytic nge anticonvulsant, okuyiluthayo, isenzo antidepressant. Ukwamukelwa izidakamizwa kwenza kube lula ukuzumeka futhi kwandisa isikhathi sokulala, ukunciphisa imvamisa awakenings nasebusuku. Ngenxa yalokho ukusetshenziswa kwezimali "Alprazolam" izibuyekezo ikakhulukazi omuhle, kukhona muscle, ukunciphisa izimpawu nokukhathazeka, ukwesaba, kwanciphisa nokucindezeleka ngokwengqondo.
Iziguli neurosis, iziyaluyalu Neurotic sidakamizwa sisiza ukuqeda ukukhathazeka kanye nobuhlungu. Imithi engabelwe kona abantu unesifo sokudangala, phakathi eyabonakala ku isizinda pathologies ukuphathwa kwabathintwayo. Lesi sikhungo ingasetshenziswa njengoba ikhambi for uvalo, ukuqwasha, ukuhoxiswa syndrome (kufaka izidakamizwa kanye notshwala).
Ukukhiqizwa nomuthi kuyinto ngesimo amaphilisi. Basuke ebiyelwe ibhamuza amaphakethe noma izimbiza plastic. Omunye ithebhulethi yakhiwa esebenzayo isithako - alprazolam - i inani 0.25 noma 1 mg. ushukela ubisi samanje zihlanganisa izingxenye ezincane.
Ifanele imithi ngomlomo "Alprazolam". Izibuyekezo babike ukusebenza kahle ithuluzi. Tablets ziphuze ngaphandle , kuye ngokuthi ukudla, kunconywa umthamo wansuku zonke ihlukaniswe ngemithamo ezimbili noma ezintathu. Isikali, ubude yokwelapha, udokotela usetha ngamunye. ukwelashwa imithi idinga kweso lwezokwelapha njalo - professional kufanele ukuqapha isimo lesiguli, ukubekezelelana kuya imithi yazo, ulungise umthamo uma kunesidingo. Ngokuvamile, umuntu omdala esimweni ukucindezeleka futhi atatazele ukubonakaliswa ukusungula umthamo kokuqala - 0.1-0.2 mg kabili noma kathathu ngosuku. Ngemva amaviki amabili usungaqala kancane kancane ukwandisa umthamo kuya 6.3 mg ngosuku. Iziguli esebuthaka futhi asebekhulile ngokuvamile musa ukhombe ezingaphezu kuka 0.25 mg kathathu ngosuku. Uma kukhona ukukhathazeka, ukungahlaliseki, ukuqwasha, umthamo watusa nsuku zonke - 0.7-1.5 mg, kungase ke senyukela 3-4.5 mg. eliphakeme umthamo kuvunyelwe ngelanga - 10 mg. Ukwelashwa izimo acute Kwenziwa izinsuku ezingu-3-5. Uma impatho kudingekile, yesikhathi eside ovunyelwe ukuthatha imithi "Xanax" (umbiko impendulo amaphilisi ibekezelelwe kahle) kuze kufinyelele ezinyangeni ezintathu. kumele kwenziwe ukuqedwa zomuthi ngesikhathi esisodwa, kodwa elokhu enciphisa umthamo zonke izinsuku ezintathu ku 500 mg (emasontweni amabili kuya kwayisithupha). Ukuhoxiswa izimpawu zingase ukuthuthukisa uma evele ukuyeka ukuphuza iphilisi "Alprazolam". Izibuyekezo basikisela ukuthi kulesi simo lesi simo sibhebhetheka noma izimpawu wabuya.
Ezigabeni kokuqala ukwelashwa kungase kubangele ukozela, isiyezi, ukukhathala, iziyaluyalu lengqondo ukusabela kanye okuhlushwa. Ngokuvamile, imiphumela emibi idatha ebonwe asebekhulile. Kungase kube nezinye izenzakalo ezimbi kubangelwa isenzo izidakamizwa.